UKUTYA KWEMINWE KWEZANDLA EZINCINCI ZOMNTWANA - UKUTYA
Ukutya Kweminwe Kwezandla Ezincinci Zomntwana
Emva kweenyanga zokufudumeza iibhotile kunye nokunxiba iimpahla zokutsala, umzuzu ufikile ekugqibeleni: umntwana wakho sele ekulungele ukutya ngomnwe, kwaye ixesha lokutya sele liza kufumana utshintsho olukhulu. Ukwazisa abantwana abancinci ngokuzondla kuyinto ephazamisayo kuye nawuphi na umzali, kodwa umvuzo ufanelekile. Ngelixa ukulumka kubaluleke kakhulu, akukho mfuneko yokundanda phezu kwesitulo esiphakamileyo. Uninzi lwezinto ezikhethiweyo zokutya ezinomnwe zigunjwa ngokulula, zithambile, kwaye zincinci ngobukhulu, zibonelela ngokutya okunesondlo, okuzaliswe yimincili kunye nomncinci wakho.
Imifanekiso yeSarenac / Getty
Iavokhado yeyona nto ithandwayo ngumnwe phakathi kwabazali abaninzi, kwaye abantwana banokuzama incasa phambi kokuba babe namazinyo. Isiqalisi esifanelekileyo malunga neenyanga ezine ukuya kwezintandathu, le veggie ayigcwaliswanga nje yincasa, kodwa i-omega-3s yokukhulisa ubuchopho eya kunceda ukukhula komntwana wakho, nayo. Ngelixa ukuthungwa kwe-squishy kwenza ixesha lokutya libe mdaka, iiavokhado zinokuba sisiqalo esihle kuhambo lwakho lokutya olusempilweni lomntwana wakho omncinci.
UMaryna Andriichenko / Getty Images
Izityalo zobisi ezifumaneka ehlabathini ezininzi zeetyhubhu ezithambileyo kunye neemilo ezincinci zenza itshizi ibe kukutya okugqwesileyo komnwe. Ngeentlobo ezininzi kangaka, umntwana wakho unokuthatha iisampulu ezahlukeneyo ukusuka esemncinane, nto leyo ebazisa kwiiprofayili zencasa entsha kwaye incede ukuphuhlisa imvakalelo yabo yokungcamla. Sika nayiphi na itshizi efakwe kwi-pasteurized kwi-bitty, kodwa unqande iintlobo ezinzima okanye ezinamandla-ezinevumba, njenge-Camembert, i-cheddar, kunye ne-Gouda.
Satoshi-K / Getty Imifanekiso
Zininzi ke iziqhamo ezityiwayo kubantwana, ngakumbi iintlobo ezithambileyo ngokwendalo, ezivuthiweyo njengeebhanana, amaqunube, iidiliya, kunye nevatala. Okuvuthiweyo, kungcono, njengoko abancinci banokungcamla incasa ngakumbi ngelixa bentywila kwi-antioxidants eninzi, iivithamini kunye neeminerali. Bavumele ukuba baqale ukuzondla ngamaqunube apheleleyo, okanye basike iziqhamo zibe ngamaqhekeza amancinci kwaye benze isitya esixutywe. Iziqhamo ezicudisiweyo zenza idiphu enencasa yepuffs okanye iibhiskithi njengoko ziqala ukuqonda ukutya okuninzi.
Andrii Iemelyanenko / Getty Imifanekiso
Zonke iivenkile ezinkulu zigcwele izinto ezifunxayo ekulula ukuba abantwana bazibambe. Ubungakanani obufanelekileyo bezandla ezincinci, iintsana kunye nabantwana abancinci banokuginya amaqhekeza angama-bite ngaphandle kokwesaba ukukrwitshwa, ukunika uxolo lwengqondo kubazali. Zifumaneka kwiintlobo ngeentlobo zencasa zeziqhamo kunye nemifuno, ziza ngemibala kunye neemilo ezenza ixesha lokutya libe mnandi, kwaye ziyingcamango elula ye-snack nangaliphi na ixesha lemini.
gpointstudio / Getty Imifanekiso
Ngaba uyazi ukuba umbono oqhelekileyo malunga neentsana ezithiyayo i-broccoli? Xa uzisa imifuno kwangethuba, ungakhuthaza iziphumo ezichaseneyo. Iintsana ezininzi ziyakuthanda ukuvala iminwe yazo malunga nemifuno ethambileyo, eshushu, ukusuka kwiminqathe kunye neebhatata ukuya kwi-broccoli kunye neebhiti. Qala ngamaqhekeza amancinci malunga neenyanga ezintandathu, kwaye wandise ubungakanani njengoko bekhula. Ukuphunga kugcina ezona zondlo, kuquka i-calcium, i-iron, i-potassium, kunye ne-zinc, ukuqala abantwana abancinci kwindlela efanelekileyo yokuphila.
kumikomini / Getty Imifanekiso
Ungafumana i-assortment yeebhiskithi ezinencasa ezenzelwe ngokukhethekileyo ukucoca kwivenkile yakho yasekhaya. Ezi zikhetho ezibalaseleyo kuba zithambile ngokukhawuleza, zivumela imilomo emincinci ukuba ilungelelanise ukuthungwa okunzima. Malunga neenyanga ezintandathu, qala ngebhokisi oyikhethileyo, kwaye bakuba befikelele kumanqaku eenyanga ezili-12, sasaza ibhotolo yamandongomane ngaphezulu ukwenzela ukuthungwa kunye nencasa eyongezelelweyo.
U-AkilinaWinner / Getty Images
Ngelixa amaqanda abilisiwe okanye alula kakhulu eqinile kwizandla ezincinci, iintsana zingonwabela amaqanda aqhekekileyo: ukutya okufanelekileyo komnwe okupakishwe ngamafutha asempilweni, i-iron, iivithamini kunye neeminerali. Kuphephe ukufaka ityuwa, ipepile, itshizi, okanye nayiphi na enye into; zibenzele nje njengoko zinjalo, kwaye uvumele umntwana ukuba akonwabele isidlo sasemini esineprotheyini. Uphando lucebisa ukuba ukuvezwa kwangaphambili kokutya okungafaniyo namaqanda kunokunceda ukukhusela iimpawu ezantsi kumgca, ngoko ke oogqirha babantwana bacebisa ukuba bazazise malunga neenyanga ezintandathu.
scottdunlap / Getty Imifanekiso
Iklasikhi yokuqala kubantwana abaninzi, iicereals ezinemilo encinci zinceda iintsana ukuba zibambe i-pincer, ukuze ziphucule izakhono zemoto kwaye zikwazi ngokukhawuleza ukutya okuninzi. Ukusuka kwiinkwenkwezi ukuya kwi-O's, linge ngeencasa, imibala, kunye neemilo ukuze ufumane iindidi ezithandwa ngumntwana wakho omncinci. I-Cereal yeyona nto ifanelekileyo nanini na i-snack eyonwabisayo ukuyitya, kwaye lutshintsho olulula ukusuka ekutyeni ngeminwe ukuya kwi-slurping phantsi kweso sitya sokuqala.
ajkkafe / Getty Imifanekiso
Isitshixo sepasta egqibeleleyo kumntwana? Ukupheka ngokugqithiseleyo ngoko umphumo wokugqibela uthambile ngakumbi. Qala ngamaqokobhe amancinci okanye usike iziqwenga ezinkulu; ungaze ushiye abantwana bodwa nemicu emide yespaghetti. Xa bekwazi ukubamba kunye nokudlala ngeqhekeza lonke, iintsana zinencasa enencasa ekulula ukuyitya. I-Plain yindlela efanelekileyo yokuqala, kodwa abancinci banokubamba i-tomato sauce encinci.
Vesnaandjic / Getty Imifanekiso
Zombini inyama kunye nentlanzi zivunyiwe ngugqirha wabantwana, ngoko ke qalisa ngokuphekwa ngokupheleleyo, amaqhekeza adiyiweyo iintsana anokuzibandakanya ngokulula nazo. Inkukhu, i-turkey, kunye nenkomo yenkomo zezona zixhaphakileyo, kodwa i-cod kunye ne-salmon zilungile kulutsha, nje ngokuba onke amathambo esusiwe. Ekubeni inyama inzima kakhulu ukuyihlafuna, le yi-snack enye abaya kufuneka baphumelele kuyo, kodwa kuya kufaneleka ukulinda. Ngaphambi kokuba uyazi, baya kukhwela amaphiko enkukhu kunye nabo bangcono kakhulu.
abahamba befile kwisizini yokugqibela
indlela ukususa hickeys kwimizuzu
lunini usuku lokuqala ngo-2021
abantu abadumileyo bathengele i-su2c
lula ulwazi jikelele imibuzo 2018
Impelaveki enkulu ye-bbc radio 1